inxi: qoraalka si aad u ogaatid qalabka nidaamkaaga GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
inxi: qoraal si aad si faahfaahsan ugu aragto qaybaha qalabka ee nidaamkaaga
Mararka qaar way waxtar leedahay in si faahfaahsan loo ogaado waxyaabaha ay ka kooban yihiin qalabka kumbuyuutarka uu adeegsado. Tan awgeed, waxaan horay u aragnay inay jiraan qalabka garaafka sida Xog adag in kasta oo ay sidoo kale macquul tahay in la eego nidaamka farriinta bootka ama la isticmaalo qaar ka mid ah amarrada marinnada, sida lsusb, lspci, lshw o dmidecode.
Si kastaba ha noqotee, shalay waxaan helay ikhtiyaar cusub, kaas oo lagu rakibay qaab ahaan qaybinta caanka ah: inxi.
1 Waa maxay inxi?
2 Sida loo rakibo inxi
2.1 Ku rakib inxi Arch iyo waxyaabo kale:
2.2 Ku rakib inxi Debian / Ubuntu iyo derivatives:
2.3 Ku rakib inxi Fedora iyo waxyaabaha la midka ah:
3 Sida loo isticmaalo inxi
Waa maxay inxi?
inxi Waa qoraal aad u dhameystiran oo u oggolaanaya soo bandhigida macluumaadka qalabka nidaamka. Waxay ku qoran tahay bash sidaa darteed si toos ah ayaa looga isticmaali karaa boosteejada.
inxi yimaado horay loo rakibay leh SolusOS, crunchbang, Cudur faafa, Linux Mint, Anti-X y Arch Linux, laakiin maadaama ay tahay qoraal bash ah waxay ka shaqeysaa waxyaabo badan oo kale. Halka loogu talagalay in lagu isticmaalo barnaamijyada lagu sheekeysto sida IRC, sidoo kale waxay ka shaqeysaa qolof waxayna bixisaa macluumaad aad u tiro badan. Waa fargeeto qoraalka infobash, aad u faa'iido badan laakiin uu helay dayactir yar muddooyinkii ugu dambeeyay.
inxi waa la jaan qaadaya Wadahadal, Xchat, irsi, Quassel; iyo sidoo kale inta badan macaamiisha IRC.
Sida loo rakibo inxi
inxi Waxay ku jirtaa bakhaarka ugu badan ee qaybinta, sidaas darteed waa suurtagal in lagu rakibo amarrada soo socda:
Rakib inxi en halka iyo waxyaabaha laga helo:
# pacman -S inxi
Rakib inxi en Debian / Ubuntu iyo waxyaabaha laga helo:
# apt-hel rakib inxi
Rakib inxi en Fedora iyo waxyaabaha laga helo:
# yum rakib inxi
Sida loo isticmaalo inxi
Kaliya waa inaad furtaa terminal oo aad maamushaa qoraalka:
Waa suurtagal in la xadido macluumaadka la soo bandhigayo iyadoo lagu saleynayo xuduudaha soo socda:
-A Tus macluumaadka kaarka codka.
-C Muuji macluumaadka CPU, oo ay ku jiraan xawaaraha saacadda CPU.
-D Muuji macluumaadka darawalnimada adag, maahan kaliya tusaalaha.
-F Tus wax soo saar buuxa ee inxi. Waxaa ku jira dhammaan xarfaha waaweyn, oo lagu daray -s iyo -n.
-G Muuji macluumaadka kaararka sawirada (kaarka, nooca, xallinta, glx processor, nooca, iwm).
-I Macluumaadka guud: habsocodyada firfircoon, waqtiga shaqada, xusuusta, macmiilka IRC, nooca inxi.
-l Muuji sumadaha qaybta.
-n Muuji macluumaadka horumarsan ee kaarka shabakadda. La mid ah -Nn. Wuxuu muujiyaa is dhexgalka, xawaaraha, cinwaanka MAC, xaaladda, iwm.
N Tus macluumaadka kaarka shabakadda. Iyadoo -x, waxay muujineysaa PCI BusID, lambarka dekedda.
Si aad u aragto liistada dhameystiran ee xulashooyinka la heli karo, waxaan soo jeedinayaa akhrinta bogga rasmiga ah ee mashruuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » inxi: qoraal si aad si faahfaahsan ugu aragto qaybaha qalabka ee nidaamkaaga
Waxaan siiyay isku day waana jeclahay qadarka macluumaadka ay bixiso iyo sida ay u fududahay. Talooyin aad u fiican 😉
Ku jawaab thalskarth
Aad u fiican, ma aanan aqoon isaga. Waa la mahadiyey.
Maaddaama Gentoo uusan ku lahayn asal ahaan, waa tan qaabeynteyda. Halkan waxaad ka heli kartaa tan iyo xirmooyin kale 😀
Aad u faa'iido badan, waxaan ku qorey yutiilitigayga dhexdooda .. ..Waxaan u maleynayey inaan ku arkay halkan baloogga .. ee
Wixii soo saar dhameystiran .. .. inxi -v7
Taasi waa waxa uu blogkani leeyahay. Waxaan ka qornay waxyaabo aad u tiro badan oo aan horeyba ugu muuqanay inaan wax walba ka qorayno. Sidoo kale, waligeen kamaan qaban qoraal gaar ah oo ku saabsan inxi. Waan hubiyey kahor qorida qoraalkan.
Aad u fiican, oo dhameystiran, runtu waxay tahay inay ila yaabtay.
Waxa ugu fiican ayaa ah inay fududahay in la akhriyo, taas oo la mahadiyo.
Tilmaam aad u wanaagsan =)
Kaliya hal faallooyin: Waxaan isku dayay inaan ku rakibo Kubuntu Precise, laakiin kuma aysan soo muuqan goobaha wax lagu keydiyo, sidaa darteed waxaan ku xaliyay anigoo ku daray Linux Mint Maya kaydinta (gaar ahaan soo dejinta), oo ay ku jirto waana intaas.
Waad ku mahadsan tahay xusuusteeda.
Waan haystay muddo dheer sababta oo ah waan joojiyay isticmaalkeeda, waxaan ilaaway magaceeda.
Waan jeclahay barnaamijyadan fudud ee sida dhakhsaha badan u xaliya shakigaaga.
haye, waa been inay ku timaaddo "horay loo rakibay" in archlinux, haddii aysan dhab ahaan wax ku rakibnayn, saldhig kuma lihi, wax ka yarna saldhig-deel. Waa inaad saxdid macluumaadkaas fadlan.
Linux 3.16 kernel waa la heli karaa ... maxaa cusub?